50 Tilmaamood Oo La Isku Raacay In Ay Haweenku Ragga Ku Doortaan, Gabadh Kastaana Jeceshahay (Q:2aad) | FooreNews
Home wararka 50 Tilmaamood Oo La Isku Raacay In Ay Haweenku Ragga Ku Doortaan, Gabadh Kastaana Jeceshahay (Q:2aad)
50 Tilmaamood Oo La Isku Raacay In Ay Haweenku Ragga Ku Doortaan, Gabadh Kastaana Jeceshahay (Q:2aad)
FoorenewsNov 21, 2015wararka0
Ninka Maskaxda Badan Ee Xariifka Ah: Haween badan oo daraasad lagu sameeyey nooca ragga ay ka helaan ayaa intooda badani sheegeen in ay jecel yihiin ragga Xirfadda badan ee shaqadooda ku wanaagsan. “Ninku haddii uu maskax furan yahay oo shaqadiisa ku fiican yahay sideebaanu la dhaqanka haweenka ugu fiicnayn?” sidan waxa is waydiisay haweenay aragtideeda ka dhiibatay arrinkan. Haweenayda maskaxda furani waxa ay hantiyi kartaa ninka maskaxda furan ee fariidka ah, iyada oo la ogaaday in fariidnimada ninku si weyn u dejiso haweenayda qalbigeeda oo ay ku xasisho niyad ahaan.
7. Ninka Khibradda U Yeesha Dabeecadda Haweenayda: Raggu way ku kala duwan yihiin khibradda ay u yeeshaan la dhaqanka haweenka. Rag badan ayaa haweenayda ay xidhiidhka la sameeyaan khibrad degdeg ah u yeesha taasina ka caawisaa in marka ay nolol wadaagaan uu sida ugu habbon ula dhaqmo maadaama uu haweenaydaasi markii ay is barteenba khibrad degdeg ah u yeeshay oo uu garanayo waxa ay gasho iyo waxa ay guddo. Haweenku ragga noocan ah aadbay uga helaan, waayo, waxa ay u arkaan nin fahmaya dabeecaddeeda oo aan ku khasbayn in ay jabiso deyrka dabeecaddeeda. Caadifadda haweenka ayuu ninka noocaasi ahi si degan ugu qaabilaa hab dhaqan ay ku kala badbaadi karaan, kaasaanay haweenku ugu jecel yihiin in ay nolol la qaybasadaan.
8. Ninka Maal-Qabeenka Ah Ee Jeebkiisu Buuran Yahay (Jannaale): Haween way isku raaceen xagga dhadhanka iyo lacagta. Rag badan oo aanay xattaa dan ka lahayn wada noolaanshihiisa ayay haween badani jeebka iyo dakhligiisa oo sarreeya ku raaceen. Haween badani waxa ay ka siman yihiin aragtida ah in ninku si kasta oo uu naaqus u yahay ama arrimo badan ugu liito, haddana haddii uu hanti badan leeyahay waxay ku soo saaraan liiska koowaad ee dookhooda. Horrayso iyo dambaysaba haween badani waxa ay si weyn ugu hammiyaan in ay gacanta ku dhigaan ninka lacagta leh.
9. Ninka Faraha Dhaadheer (Laacdanka Badan): Inkasta oo dhaqan ahaan arrinkani ka muslimiin ahaan innagu adag yahay haddana marka laga hadlayo xagga xidhiidhka lammaane ee wada jira, waxa la ogaaday in ragga haweenka la ciyaara ee ku wanaagsan fara-ka ciyaarku uu noqday mid qalbiga haweenayda ku weyn. Taabashadu waxa ay ka mid tahay aaladaha ugu awood badan ee dhinaca soo jiidashada dareenka-jidh iyo caadifadeedba. Waxa uu qayb weyn oo muhiim ah ka yahay dhismaha dareenka caadifadeed ee nafsiga ah waxaanu aad ugu habboon yahay lammaanaha is qaba. Haweenaydu waxa ay jeceshahay ninka xidhiidh toos ah oo taabasho la sameeya jidhkeeda wakhti kasta, xataa iyada oo aan uba diyaarsanayn wakhti la wada ciyaaro. Xidhiidhka taabasho ee jidhku (Wada Ciyaaristu) kuma koobna oo kali ah wakhtiga xidhiidhka galmo sida rag badani aaminsan yihiin ama ay samaayeen. Haweenku waxa ay jecel yihiin ragga haweenayda la ciyaara.
10. Geesinnimada (Ninka Geesiga Ah): Haweenku waxa ay tilmaan ahaan jecel yihiin ninka geesiga ah ee sooma-jeestaha ah, waxaanay neceb yihiin oo ka siman yihiin ninka fulaynimo lagu sheego. Geesinimada iyo calool adayga ninku waxa ay deganaansho u tahay ilaalin iyo dareen ammaan oo ku abuurma qalbiga haweenayda. Wakhtiyadii hore ee dadku miyiga u badnaa astaantani waxa ay ka mid ahayd astaamaha ugu horreeya ee haweenku ninka ku doortaan. Heesaha ay ku ammaanaan raggana waxa ugu horraysay astaanta geesinnimada.
Previous Post21-Ka November Maanta Oo Kale Maxaa Dunida Soo Maray? Qormo Taariikheed Xiiso Badan Oo Taxane Ah Next PostMaxaad Ka Taqaan 12-ka Hogaamiye Ee Dawladaha Quwadda Weyn Ee Adduunka Ugu Mushaharka Badan?